Karl Barth: Mpaminanin'ny Fiangonana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny fiangonana > Karl Barth: MPAMINANY ao amin'ny fiangonana
Ilay teolojiana soisa Karl Barth dia notondroina ho teolojika evanjelika malaza indrindra sy tsy miovaova amin'ny vanim-potoana maoderina. Papa Pius XII (1876–1958) niantso an'i Barth ho teôlôjiana lehibe indrindra nanomboka tamin'i Thomas Aquinas. Na manao ahoana na manao ahoana ny fijerinao azy, Karl Barth dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny mpitondra fiangonana sy ny manam-pahaizana kristiana maoderina avy amin'ny fomban-drazana maro samy hafa.
Taona fankasitrahana sy krizy mino
Barth dia teraka tamin'ny 10 Mey 1886, teo an-tampon'ny herin'ny teolojia liberaly tany Eropa. Mpianatra sy mpianatr'i Wilhelm Herrmann (1846–1922) izy, mpampahalala nalaza ny teolojia antropolojika antsoina hoe anthropological, izay mifototra amin'ny zavatra niainan'Andriamanitra manokana. Nanoratra momba azy i Barth: Herrmann no mpampianatra teolojika fony aho mpianatra.  Tao anatin'ireo taona voalohany ireo dia nanaraka ny fampianaran'ny teolojianina alemà Friedrich Schleiermacher (1768–1834), rain'ny teolojia maoderina koa i Barth. Nirona hanome azy fide implicita [an-jambany] manerana ny solaitrabe aho, hoy ny nosoratany. 
1911-1921 i Barth dia mpitandrina ny vondrom-piarahamonina fanavaozana ao Safenwil any Switzerland. Fampisehoana iray izay noporofoan'ny manam-pahaizana alemà miisa 93 ho fankasitrahana ny ady nataon'i Kaiser Wilhelm II dia ny fampifangaroana ny fototra niorenan'ny finoana madiodio azy tamin'ny Aogositra 1914. Ireo mpampianatra teolojia liberaly koa nomen'i Barth dia anisan'ireo mpanasonia. Izy io dia nitondra eran-tany exegesis, etika, dogmatika ary toriteny izay ninoako teo aloha fa azo itokisana ... hita ao amin'ny fototry ny fototra, hoy izy.
Nino i Barth fa namadika ny finoana kristiana ny mpampianatra azy. Tamin'ny fanodinana ny filazantsara ho fanambarana, ny fivavahana iray, momba ny endrik'ny Kristiana, ny olona iray dia tsy nahita an'Andriamanitra, izay mifehy ny olona amin'ny fiandrianany, dia mitaky kaonty avy aminy ary hanao azy ho Tompo.
Eduard Thurneysen (1888–1974), pasiteran'ny vohitra iray mpifanila vodirindrina aminy ary sakaizany akaiky an'i Barth tamin'ny andron'ny mpianany dia niaina krizy nisy tamin'ny finoana. Indray andro dia nibitsibitsika tamin'i Barth i Thurneysen: izay ilaintsika amin'ny fitoriana, fampianarana sy fikarakarana pastora dia fototra teolojika 'hafa tanteraka'. 
Niara-niady izy ireo nitady fototra vaovao ho an'ny teolojia kristiana. Rehefa mianatra ny teolojia ABC indray dia zava-dehibe ny hanombohana amin'ny famakiana sy ny fandikana ny asa soratry ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao amin'ny fomba akaiky kokoa noho ny teo aloha. Ary indro, indro: nanomboka niresaka taminay izy ireo ...  Ilaina ny fiverenana amin'ny fiandohan'ny filazantsara. Ny asa dia ny hanombohana indray miaraka amin'ny fananganana toe-tsaina vaovao ary hahafantatra indray an'Andriamanitra ho Andriamanitra.
Taratasy ho an'ny Romana sy ny dogmatika an'ny Fiangonana
Tamin'ny taona 1919, ny tsikombakomba niorenan'ny tany Barth Der Römerbrief dia niseho ary nohavaozina tanteraka tamin'ny 1922 ho an'ny fanontana vaovao. Ny taratasy nohavaozina ho an'ny Romana dia namolavola rafitra teolojika vaovao be fahasamihafana izay nomen'Andriamanitra azy, amin'ny fahaleovantenany amin'ny olona ihany ary mahita ahy. 
Nahita tontolo vaovao i Barth tao amin'ny taratasin'i Paoly sy ny asa soratra hafa. Tontolo iray izay tsy hita intsony ny eritreritra marina an'Andriamanitra, fa ny fisain'Andriamanitra marina momba ny olona.  I Barth dia nanambara fa hafa tanteraka Andriamanitra, izay tsy takatry ny saintsika intsony, mijanona ho antsika, tsy mitovy amin'ny fihetseham-pontsika ary tsy fantatra afa-tsy amin'i Kristy. Ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra mazava tsara dia misy: ny maha-olombelona azy.  Ny teolojia tsy maintsy fotopampianaran'Andriamanitra sy olona. 
Tamin'ny taona 1921, dia lasa mpampianatra ny fanavaozana teolojia tany Göttingen i Barth, ary nampianatra hatramin'ny taona 1925 izy. Ny faritany fototra dia ny dogmatika, izay noheveriny ho fisaintsainana ny Tenin'Andriamanitra ho fanambarana. Ny soratra masina sy ny toriteny kristiana ... dia mamaritra ny toriteny kristiana. 
Tamin'ny taona 1925 dia voatendry ho mpampianatra ny dogmatika sy ny fanavaozana ny Testamenta Vaovao ho an'i Münster izy ary dimy taona taty aoriana dia nijanona ho filohan'ny teolojika rafi-pitondran-tena tao Bonn, izay nitaonany hatramin'ny 1935.
Tamin'ny taona 1932 dia namoaka ny ampahany voalohany amin'ny Church Dogmatics izy. Ny zavamaniry vaovao dia nitombo isan-taona isaky ny lahateny.
Dogmatics dia manana fizarana efatra: Ny fotopampianaran'ny tenin'Andriamanitra (KD I), ny fotopampianaran'Andriamanitra (KD II), ny fotopampianarana momba ny famoronana (KD III) ary ny The doctrine of fampihavanana (KD IV). Ireo singa tsirairay avy dia ahitana boky maromaro. Tamin'ny voalohany, i Barth dia namolavola ny sanganasa mba hanana ampahany dimy. Tsy vitany ny namita ilay ampahany tamin'ny fampihavanana, ary ny ampahany momba ny famonjena dia nijanona tsy voasoratra taorian'ny nahafatesany.
Thomas F. Torrance dia miantso ny maha-dogmatika an'i Barth hatrany amin'ny fanomezana voalohany sy miavaka indrindra amin'ny teolojika ara-teknika maoderina. KD II, fizarana 1 sy 2, indrindra fa ny fampianarana momba ny fiasan'Andriamanitra sy ny ataon'Andriamanitra amin'ny maha-Izy azy, dia noheveriny ho famaranana ny fanaon'ny dogmatika an'i Barth. Eo imason'i Torrance, ny KD IV no asa mahery vaika indrindra nosoratan'ny teoria amin'ny fanavotana sy ny fampihavanana.
Kristy: voafantina sy nifidy
Namaly ny fotopampianaran'ny Kristiana iray manontolo i Barth tamin'ny fanakianana sy fandikan-dàlam-pandrefesana azy. Nanoratra izy hoe: Ny asako vaovao dia ny mamerina indray ary milaza izay rehetra nolazaiko teo aloha, ankehitriny ho teolojika ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy.  I Barth dia nitady ny hitory ny toriteny kristiana ho toy ny hetsika manambara ny fiasan'Andriamanitra mahery fa tsy ny zavatra sy ny tenin'ny olona.
Kristy dia eo afovoan'ny dogmatika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Karl Barth dia teolojiana Kristiana izay niahy indrindra ny mampiavaka an'i Kristy sy ny Filazantsarany (Torrance). Barth: Raha malahelo ny tenanao ianao eto, dia tsy nahatratra ny tenanao mihitsy ianao.  Io fomba fiasa io sy io fiorenan'ny finoana tao amin'i Kristy io dia nahavonjy azy tsy ho latsaka tao anatin'ny fandriky ny teolojia voajanahary, izay manondro ny fahefan'ny olona manana fahefana amin'ny hafatra sy ny endrika fiangonana.
Nanantitrantitra i Barth fa i Kristy no fahefana manambara sy mampihavana izay itenenan'Andriamanitra amin'ny olona; amin'ny tenin'i Torrance, ny toerana anekenay ny Ray. Andriamanitra irery no eken'Andriamanitra, hoy i Barth taloha.  Ny fanambarana momba an'Andriamanitra dia marina raha mifanaraka amin'ny Kristy; eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona no mijoro ho an'i Jesosy Kristy, eny fa na Andriamanitra na dia ny olona izay manelanelana azy roa aza. Ao amin'i Kristy dia manambara ny tenany amin'ny olona Andriamanitra; mahita ao aminy izy ary mahalala olona Andriamanitra.
Tao anatin'ny teoria-ny mialoha ny fanendrena azy dia nanomboka tamin'ny fifidianana ny dikan'i Kristy i Barth: Kristy no voafidy sy voafidy tamin'ny fotoana mitovy. Tsy Andriamanitra voafidy ihany i Jesosy fa olom-boafidy ihany.  Ny fifidianana dia tsy maintsy manao afa-tsy amin'i Kristy, izay nifidianany - dia mandray anjara. Manoloana ny fifidianana ny olombelona - araka ny Barth - ny fahitana rehetra dia azo raisina ho fahasoavana maimaimpoana fotsiny.
Talohan'izay sy aorian'ny Ady Lehibe Faharoa
Ny taona Barth tany Bonn dia nifanandrify tamin'ny fiakarana sy fakana an'i Adolf Hitler. Fikambanam-piangonana ara-tsosialy Nasionaly, ny Alemanina Kristiana, dia nanandrana nanamarina ny Fiihrer ho mpamonjy avy amin'Andriamanitra.
Tamin'ny volana aprily 1933, ny fiangonana Evanjelika Alemanina dia natsangana tamin'ny tanjon'ny fampidirana ny etona Alemanina momba ny firazanana, ny ra sy ny tany, ny olona ary ny fanjakana (Barth) ho fototra faharoa ary loharanon'ny fanambarana ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana nibaboka dia nipoitra ho toy ny fihetsika tsy nety, nandà io firehan-kevitra nasionalista sy mifototra amin'ny vahoaka io. I Barth dia iray tamin'ireo olona nalaza tamin'izy ireo.
Tamin'ny Mey 1934 dia namoaka ny fanambarana malaza Barmer Theological Declaration izy, izay avy any Barth ary taratry ny teolojian'i Kristy. Ao amin'ny lahatsoratra enina, ny fanambarana dia miantso ny fiangonana hifantoka tanteraka amin'ny fanambarana an'i Kristy fa tsy amin'ny fahefana sy fahefana ananan'olombelona. Ivelan'ny tenin'ny Tenin'Andriamanitra iray dia tsy misy loharanom-pahalalana hafa ho an'ny fitoriana ny Fiangonana.
Tamin'ny Novambra 1934, very ny fahazoan-dàlana nampianarany an'i Bonn taorian'ny tsy nandavany sonia ny fianianana tsy misy fepetra an'i Adolf Hitler. Nesorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana jona 1935, dia nahazo antso tany Soisa izy ho mpampianatra ny teolojia tany Basel, toerana izay nitazona azy mandra-piraisany tamin'ny 1962.
Tamin'ny 1946, aorian'ny ady, dia nasaina indray i Barth indray tao Bonn, ary nitarika andian-tsoratra ho an'ny famoahana andiany tamin'ny taona manaraka izy ho Dogmatics in the Demolition. Namboarina araka ny filazan'ny Apostoly, ny boky dia miresaka momba ny lohahevitra novolavolain'i Barth tao amin'ny dogma eoropeanina be dia be nataony.
Tamin'ny 1962, nitsidika an'i Etazonia i Barth ary nanao lahateny tao amin'ny seminera teolojian'ny Princeton sy ny University of Chicago. Raha nanontaniana ny hamintina vetivety ny teolojika ny dikan'ny teny an-tapitrisany ao amin'ny Church Dogmatics, dia voalaza fa nieritreritra vetivety izy avy eo:
Tia ahy i Jesosy, azo antoka. Satria mampiseho ny soratra izany. Azo antoka na tsia ilay fanamarihana: Namaly ny fanontaniana toy izao i Barth. Miresaka avy amin'ny finoany fototra fa ny fototry ny filazantsara dia hafatra tsotra izay manondro an'i Kristy amin'ny maha-Mpanavotra antsika, izay tia antsika amin'ny alàlan'ny fitiavana an'Andriamanitra tanteraka.
Tsy nahalala ny dogmatics revolisionera nataony i Barth fa ilay teny farany amin'ny teolojia, fa toy ny fanokafana ny adihevitra iraisana vaovao.  Modely amin'ny fomba tsotra, tsy voatery mamela ny asany haharitra mandrakizay izy: any amin'ny toerana misy scre any an-danitra dia navela handatsaka ny dogmatika am-piangonana ihany izy ... toy ny fandaniam-taratasy.  Nandritra ny lahateny farany nataony dia nifarana izy fa ny fahalalany teolojika dia hitarika fisaintsainana indray amin'ny ho avy, satria ny Eglizy dia voatery nanomboka nanomboka ny aotra isan'andro, isan'ora.
Amin'ny 12. Tamin'ny Desambra 1968 dia maty tany Basel i Karl Barth teo amin'ny faha-82 taonany.
Karl Barth, Ny maha-zanak'Andriamanitra. Biel 1956
Karl Barth, Fiangonana Dogmatika. Vol. I / 1. Zollikon, Zurich 1952, vol. II
Karl Barth, Taratasy ho an'ny Romanina. 1. Version. Zurich 1985 (ao anatin'ny Barth Complete Edition)
Karl Barth, dogmatics amin'ny fandravana. Munich 1947
Eberhard Busch, CV Karl Barth's. Munich 1978
Thomas F. Torrance, Karl Barth: Teolojika ara-Baiboly sy evanjelika. T. & T. Clark 1991
3 Taratasy ho an'ny Romana, Fambara mialoha, p. IX
Roimemy 12, passim